अन्तर्वार्ताको ३७औं मिनेटपछि बल्ल प्रचण्डले संयुक्त सरकारको आवश्यकता किन भन्नेबारे बेलिविस्तार लगाउन सुरु गरे। ठ्याक्कै त्यहीँ भारतको कुरा जोडिएको छ। सृजना घिमिरे
विगतका दिनमा नेपाली सेनाले कोरोना शव व्यवस्थापन गर्दै आएको र मन्त्रालयको मृत्यु तथ्यांकमा फरक परेको थियो। सो तथ्यांक एकनास बनाउनको लागि सरकारले समिति नै गठन गरी अध्ययन गरेको थियो। आयोमेल संवाददाता
कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयकाे याे सूचना र मिडियामा आएका समाचारहरू सरसर्ती हेर्दा त लाग्छ, ‘महाकाली नदीमा ठूलै सुख्खा पहिराे खसेछ। र, नदी थुनिएर साँच्चिकै खतरा बढेछ।’ आयोमेल संवाददाता
एसियाली मुलुकका नियामक बायोएनटेक एसइ, मोडर्ना इन्कर्पाेरेटड र अस्ट्राजेनेका पिएलसीसँगको सहकार्यमा फाइजरले बनाएको कोरोनाविरुद्धको खोप प्रयोग अनुमति दिनेबारे विचाररत छन्। तर, केही मुलुकहरू भने सुरुमै वृहत परिमाणको खोप आपूर्ति तयारी गरिरहेका छन्। आयोमेल संवाददाता
पुस १६ : कांग्रेसको आन्दोलन कि ‘मेलमिलाप’?
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बुधबार चार दिन पुग्यो। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आगामी रणनीति नै तय गर्न सकेको छैन। पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै मध्यावधि चुनावको घोषणा गरिएपछि कांग्रेस नेताहरूले ‘असंवैधानिक कदम’ त भने। तर, कांग्रेसले हालसम्म आन्दोलनका ठोस कार्यक्रमसमेत घोषणा गर्न सकेको छैन। धैर्यकान्त दत्त
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले मंगलबार साँझ ७ः०५ बजे सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा यसरी ट्विट गर्दा ‘रासायनिक मलबिना धान रोपेका किसानले गहुँ सिजनमा मल पाउने भए' भन्ने अर्थ लाग्याे। आयोमेल संवाददाता
विदेशमा अलपत्रको ‘उद्धार’ सकिएकै हो?
सिसिएमसीको तथ्यांकअनुसार सरकारले जेठ २३ गतेबाट चार्टर्ड विमानमार्फत् उद्धार थालेकामा आइतबारसम्म विभिन्न देशबाट १ लाख ३६ हजार ३ सय ९३ नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। आयोमेल संवाददाता
उनको यो ट्वीटको अर्थ लाग्छ ‘भारतले नेपाललाई रेल उपहार दिएको हो’ उनको यो ट्वीटमा अहिले थुप्रै नेपाली र भारतीयहरुले विभिन्न प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्। आयोमेल संवाददाता
तर, विद्यालय नै नखुलेका कारण उनीहरूले विभिन्न शीर्षकमा भने शुल्क असुल्न पाउने छैनन्। त्यसका लागि स्थानीय तहले सुरपरीवेक्षण गर्नेछन्। जस्तो कि, निजी विद्यालयले भर्ना शुल्कसहित खेलकूद, प्राथमिक उपचार, कम्प्युटर, ल्याब, परीक्षा शुल्क, यातायातलगायत सबैजसो मासिक शुल्कमै जोडेका हुन्छन्। कृष्ण मल्ल
लोगो कसरी लतपतियो?
सुन र चाँदीको (लेपन) सम्मिश्रण गरिएको लोगोमा नक्साको स्वरूप र संघीय संसद् शब्द गलत ढंगले प्रयोग गरिएका छन्। लिम्पियाधुरासहितको नक्सा समेटेर तयार पारिएको लोगोमा मुलुकको नक्सा भने हेर्दै नेपालको जस्तो छैन। आयोमेल संवाददाता
‘सटडाउन भनेको जसरी हामी कम्प्युटर सटडाउन गरे बन्द हुन्छ नि हो त्यस्तै गरी प्रशासनले आफ्ना सेवा केही समयका लागि बन्द गरेका हुन्,’ गृह प्रवक्त्ता बुढाले भने, ‘तर, अब पनि पूर्णलकडाउन हुने वा सबै क्षेत्र ठप्प पार्ने कुरा हल्लामात्रै हो।’ आयोमेल संवाददाता
पीडित पक्ष र राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख नारायण रुपाखेतिको कुरा सुन्दा उनीहरूको घर परुई खोलामा पनि छ। याे उनीहरुकाे स्थायी बसाेबास गर्ने घर हाे। कुसुमखोलामा पहिले भएको घर भत्काएर उनीहरूले तल सारेका छन्। निकुञ्ज र चेपाङ समुदायबीच छाप्रो र घर भन्ने विषयमा कुरा बाझिएको छ। खास विवादमा आएकाे कुरा चाहीँ कुसुमखाेलाकाे मुद्दा हाे। वसन्त ढुङ्गाना
'वास्तविक अयाेध्या भारतमै छ'
प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो अभिव्यक्तिको कुनै आधार नरहेको जानकी मन्दिरका महन्त रामतपेश्वर दासले टिप्पणी गरेका छन्। महन्त दासले त्रेतायुगदेखि नै अयोध्या अहिले रहकै ठाउँमा रहेको बताए। धैर्यकान्त दत्त
‘ढलको पानीमा किन काेराेना जाँचेको?’
अहिलेको समयमा सबैको परीक्षण गर्ने क्षमता नभएको र समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरस पुगेको छ कि छैन भन्ने उद्देश्य लिएर काठमाडौं उपत्यकाको ढलको पानी परीक्षण गरिएको डा. दिवेश कर्माचार्य बताउँछन्। पुष्पराज चाैलागाईं
आरडिटी कि पिसिआर?
कोरोना परीक्षण गर्न भित्र्याइएको करोडौंको किट थन्क्याउन र पिसिआर परीक्षण तीव्र बनाउन विज्ञकाे सुझाव छ। आरडिटी परीक्षणबारे सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयको धारणालाई समेत विज्ञहरूले चुनौती दिएका छन्। सर्वोच्च अदालत र काठमाडौं जिल्ला अदालतले पिसिआर परीक्षणलाई तीव्रता दिन आदेश दिएका छन्। आयोमेल संवाददाता
‘गुल्मीका कोरोना संक्रमितको मृत्यु’ खबरमा काे दोषी, मिडिया कि अस्पताल?
पछि बिरामीको मृत्युको विषय फेरिएको खबर आएपछि मन्त्री बरालले अस्पतालका अध्यक्ष चिन्तामणि पाण्डेलाई फोन गरी यथार्थ जानकारी मागेका थिए। मन्त्रीले अस्पतालबाट गलत सूचना भएको भन्दै क्षमायाचना गरेका छन्। कृष्ण मल्ल